Tuesday, 12 February 2013 11:08	नागरिक
Tuesday, 12 February 2013 11:06	नागरिक
नित्सेको 'ईश्वरको मृत्यु', रोलाँ बार्थको 'लेखकको मृत्यु', फुकुयामाको 'इतिहासको अन्त्य', ल्योतारको 'महाख्यानको अन्त्य', 'केन्द्रको अन्त्य'। यसैलाई जोडेर मैले भर्खरै एउटा रेडियो अन्तरवार्तामा 'बाहुनवादको अन्त्य' भनेँ। कसैले आज नभए भोलि भन्ला।
Saturday, 09 February 2013 19:37	नागरिक
बसन्त बस्नेत- नयाँ दिल्लीबाट पाँच घण्टा बस यात्रापछि पुगिने जयपुर गुलाबी शहर (पिंक सिटी) नामले चर्चित छ। राजस्थान प्रान्तको राजधानी जयपुरका दरबार, किल्ला र घरहरू प्रचलित गुलाबी रंगले पोतिएका छन्। डिग्गी प्यालेस तीमध्ये एक हो जहाँ सात वर्षयता वर्षेनी साहित्यको कुम्भ आयोजना हुन्छ। यही पिंक सिटी वर्षारम्भ अर्थात् जनवरी छेक मसीको शहर (इंक सिटी) मा अनुदित हुन्छ।
Saturday, 09 February 2013 19:35	नागरिक
उज्ज्वल प्रसाई-स्थगित भयो भने सपना के हुन्छ?
के त्यो घाममा सुकाएको किसमिस जस्तो चाउरिन्छ?
कि घाऊझैं पाक्छ र पीप बग्छ?
वा कुहिएको मासुजस्तो गन्हाउँछ त्यो?
चिनीको पागझैं जम्छ कि सपना?
सायद त्यो गह्रुँगो भारीजस्तो
बिस्तारै घसि्रने हुन्छ।
कि विस्फोट हुन्छ सपना?
Saturday, 09 February 2013 19:34	नागरिक
एलबी क्षेत्री- सन् १९६५ मा भारतको इलाहावाद बोर्डबाट तृतीय श्रेणीमा एसएलसी पास गरी जीव विज्ञान पढ्न आइएस्सी भर्ना भए पनि बीचैमा छोड्नु पर्‍यो। त्यसपछि म चितवन आइपुगेँ। माताजी र दुई भाइ २०२२ सालमै चितवन आइसकेका थिए।
फुटपाथमा साहित्यको व्यापार
Wednesday, 06 February 2013 10:03	नागरिक
फुटपाथका पुस्तक बिक्रेता व्यापारी मात्र होइनन्, साहित्यको सेवक पनि हुन्। पुस्तकमा रुचि नभएकाहरूको आँखा पनि एकपटक सडक किनारमा राखिएका पुस्तकमा ठोक्किन्छ नै। कहिलेकाहीँ त राम्रो कभर भएको पुस्तक पल्टाएर हेरी टोपल्छन्। आकर्षक तस्बिर भए दुईचार पाना पल्टाउँछन् पनि। मन छुने विषय भेटे किनिहाल्छन्। फुटपाथका बेनामे पुस्तक बिक्रेताले यसरी नै नयाँ पाठकको संख्या बढाएका छन्।
मध्यरातमा देश खोज्दा
Wednesday, 06 February 2013 10:02	नागरिक
मध्यरातमा मस्त सुतेको सहर सुम्सुम्याइ हिँड्नुको मज्जा बेग्लै छ। हामी हिँड्दै गरेको यो सडक किनारबाट धेैरै घर फर्किसकेका छन्। रत्नपार्क दिनभरको थकाई मारेर मस्त निद्रामा छ।
'नो प्यान्ट् सबवे राइड' मेक्सिकोदेखि जापानसम्म
नगर माया कसैलाई